यी हुन् प्लास्टिकको पुतली लिएर सुत्ने पहलवान जो पुतलीसँग बिहे गरे ! सामाजिक सञ्जालमा भए ट्रोल, यस्तो छ उनको रोचक कहानी – List Khabar
Home / रोचक / यी हुन् प्लास्टिकको पुतली लिएर सुत्ने पहलवान जो पुतलीसँग बिहे गरे ! सामाजिक सञ्जालमा भए ट्रोल, यस्तो छ उनको रोचक कहानी
यी हुन् प्लास्टिकको पुतली लिएर सुत्ने पहलवान जो पुतलीसँग बिहे गरे ! सामाजिक सञ्जालमा भए ट्रोल, यस्तो छ उनको रोचक कहानी
admin January 5, 2022 रोचक Leaveacomment 101 Views
कुनै मानिसकाहरू यति फरक र अनौठो हुन्छन् कि अरूका लागि यसलाई पागलपन भन्न थाल्छ। धेरै मानिसहरूले मानिसलाई माया गर्छन र उनीहरूलाई नै आफ्नो प्रेमी-प्रेमिका बनाउँछन् तर यहाँ बिल्कुलै फरक भएको छ एक बडी बिल्डरले वयस्क गुडियाहरू मन पराउँछन्। प्रेम मात्र होइन उनले गुडियासँग दुई पटक बिहे पनि गरिसकेका छन् र हरेक रात उनीसँग सुत्छन् ।
कजाकस्तानका ३६ वर्षीय युरी टोलोचकोलाई प्लास्टिकको पुतलीको धेरै माया छ । उनले यसअघि मार्गोट नामको पुतलीसँग विवाह गरेका थिए तर सम्बन्धमा दरार आएपछि उनले उनीसँगको स’म्ब’न्ध तो’डे’र लुना नामको पुतलीसँग विवाह गरे । डेली स्टारको रिपोर्टका अनुसार अहिले उनी लुनासँग लोला नामको पुतलीसँग पनि सम्बन्धमा छन् र उनी दुवैसँग सुत्न र समय बिताउन मन पराउँछन् ।
बिहे गर्दा युरीले बिहे गर्दा उनका नजिकका मानिसहरु पनि सामेल भएका थिए । विवाह पछि,उनी गत वर्ष प्लास्टिकको पुतली पत्नीसँग हनिमुनमा गए जहाँ उनले दोस्रो पत्नीसँग रोमान्टिक फोटोहरू साझा गरे। पुतलीप्रतिको आफ्नो लगावलाई उनले प्रेमको नाम दिए पनि सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले उनलाई अ’श्ली’ल कु’रा लेख्छन्।
वेबसाइटसँग कुरा गर्दै युरीले उनको शौक र निर्जीव पुतलीप्रतिको मायाका आधारमा मानिसले आफूलाई पागल नठान्नु पर्ने बताए । उनी मानसिक रुपमा पूर्ण रुपमा स्वस्थ छन् । उनले भने- मानिसहरूले मलाई ट्रोल गर्छन्। पागल भन्छन् । म एक्लै छु त्यसैले यस्तो जीवनशैली बाँचिरहेको छु भन्ने गलत धारणा उनीहरुमा छ । तर, पटक्कै त्यस्तो होइन । मानिसहरूले मलाई मनोवैज्ञानिक भेट्न पनि सल्लाह दिन्छन्।
उनी भन्छन् कि जब मानिसहरूले उनलाई महिलालाई या’त’ना दिन मन पराउने जनावर हो भनेर भने तब आफूलाई नराम्रो लाग्छ, त्यसैले उसले आफ्नो रिस पुतलीमाथि निकाल्छ। यद्यपि युरीले भने कि उनी केवल पुतलीहरू मन पराउँछन् तिनीहरू पूर्ण रूपमा सामान्य छन्।
Previous घुर्ने समस्या हुनेहरुका लागि गर्धन तथा मुखको कसरत
Next कुनै समय रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने नोरा फतेही अहिले यसरी भईन बलिउडकी कुइन् (हेरौ तस्बिरहरू)